Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington HUD Qaybta 811 Caawinta Kireysiga
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|HUD Qaybta 811 Caawinta kirada
Qeybta 811 Kaalmada ijaarka
Qeybta 811 Bannaanbaxa Caawinta Kireynta Mashruuca (811 PRA) ee la siiyay Ganacsiga ee Xafiiska Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka (HUD) oo ah $ 5.7 milyan ayaa siin doonta kaalmada kirada ku saleysan mashruuca dakhliga aadka u hooseeya, qoysaska aan naafada ahayn ee naafada ah in muddo ah ee shan sano (oo leh cusbooneysiin sanadle ah intaas ka dib iyada oo lagu saleynayo qoondaynta Congress). Hadafka barnaamijku wuxuu waafaqsan yahay mabaadi'da hagta ee Sharciga Naafada Mareykanka iyo tii 1999kii ee Maxkamadda Sare ee Mareykanka ee Olmstead v. LC, taas oo u baahan gobolka iyo dawladaha hoose inay siiyaan adeegyo shakhsiyaadka naafada ah ee ku jira meesha ugu habboon ee ku habboon baahiyo. Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka waxay iskaashi kala samaynaysaa Ganacsiga bixinta iyo isku dubaridka adeegyada.
Kuwa soo socdaa waxay soo bandhigayaan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan Barnaamijka 811 PRA.
Barnaamijka '811 PRA' wuxuu siiyaa kaalmada kaalmada kirada ee mashruuc ku saleysan dadka aan naafada ahayn ee naafada ah taasoo dabooli doonta farqiga u dhexeeya kireystaha lacagtiisa iyo kirada la oggolaaday. Barnaamijku wuxuu abuurayaa iskaashi u dhexeeya Ganacsiga iyo Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (DSHS) taas oo kordhin doonta guryo kiro ah oo loogu talagalay dadka naafada ah iyadoo lagu darayo qaybaha caawinta ee Qaybta 811 PRA ee ka jira guryaha cusub, kuwa cusub ama kuwa dib-u-habeynta lagu sameeyay oo isugu jira dakhli iyo xaalad naafonimo.
Hantida qoysaska badan ee uqalma waxay noqon kartaa hanti kasta oo cusub ama mid jirta oo lagu maalgeliyo Sanduuqa Guryaha ee Gobolka Washington, HOME, Barnaamijka Canshuurta Guryaha ee Dakhliga Hoose ee Gobolka Washington (LIHTC), barnaamijka BSH ee Multifamily Bond, ama USDA - Horumarinta Reer Miyiga Cutubyadu waa inaysan hadda haysan xaddidaad adeegsi jirta ama waajib ku ah qandaraaska inay ugu adeegaan dadka naafada ah Guryuhu waa inay lahaadaan ugu yaraan 5 guri. Wax aan ka badnayn 25 boqolkiiba wadarta cutubyada ka tirsan guryaha qoysaska u qalma ayaa: 1) la siin karaa Qaybta 811 lacagaha PRA; 2) in loo isticmaalo guryo taakuleyn ah oo loogu talagalay dadka naafada ah; ama 3) aad leedahay doorbid kasta oo deganaansho oo loogu talagalay dadka naafada ah. Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, dookhyada deganaanshaha ee hadda aan qandaraaska ku jirin / horumarin laguma tirin karo xaddiga boqolkiiba 25. Ujeeddada HUD waa in la ballaariyo tirakoobka unugyada ay heli karaan dadka naafada ah oo aan lagu darin oo keli ah kabidda unugyada hadda jira oo leh dookhyadan.
Mashruuc ay si wada jir ah u maalgeliyeen HTF iyo WSHFC oo la siiyay lacag loogu talo galay dhismaha cusub sanadkii 2008 ayaa wadar ahaan ah 40 qaybood, 8 ka mid ah ayaa loo qoondeeyay qandaraaska WSHFC ee loogu talagalay qoysaska naafada ah. Mashruucu wuxuu codsan karaa oo keliya laba cutub oo 811 PRA ah ka hor inta uusan gaarin heerka 25%.
Mashruuc wuxuu khuseeyaa HTF maalgalinta sanadka 2014 ee dib u soo nooleynta iminkana kama jiro faylalka. Waxay leedahay 40 qaybood waxayna soo jeedinaysaa in 10 cutub loo qoondeeyo qoysaska naafada ah. Mashruucani wuxuu dalban karaa kabista 811 ee PRA ilaa iyo 10 cutub kahor inta uusan gaarin heerka 25%. Tan waa la oggol yahay maxaa yeelay meela gaar ah oo loogu talagalay dadka naafada ah ayaan hadda ku jirin guriga.
Cutubyadu waa inay buuxiyaan shuruudaha barnaamijka iskuxirka unugyada iyo marin u helida iyo helitaanka gaadiidka iyo adeegyada. Unugyada leh kaabista mashruuca muddada-dheer uma qalmo kabidda 811 PRA.
Waqtiga gelitaanka, ugu yaraan hal qof oo ka mid ah qoysaska loo tixgeliyey unug qaata kaalmooyinka kirada ee 811 PRA waa inay ahaadaan kuwo aan da 'ahayn (18-61 sano jir), naafo ah, oo hela ama xaq u leh inay helaan Medicaid iyo adeegyada iyo taageerada lagu bixiyo DSHS. Shakhsiyaadka waa in ay leeyihiin dakhli aad u hooseeya oo ka hooseeya boqolkiiba 30 AMI ama ka hooseeya boqolkiiba XNUMX AMI, oo ay ku jiraan culeyska DSHS.
Shaqaalaha bulshada ee DSHS iyo maareeyayaasha kiisaska waxay aqoonsan doonaan oo ay ku baari doonaan macaamiisha kiisaskooda culeyska hadda ku nool goobaha hay'adaha iyo sidoo kale kuwa guryaha iyo guryaha ku saleysan beel ahaaneed, si loo daneeyo in loo guuro guryaha guryaha ku saleysan bulshada ee ka hela gargaarka 811 PRA . Shaqaalaha DSHS waxay lashaqeyn doonaan milkiilayaasha guryaha si ay ula socodsiiyaan shaqooyinka banaan waxayna hubiyaan in adeegyo taageero ah lasiinayo macaamiisha. Milkiileyaasha mashruuca iyo ururada kale awood uma yeelan doonaan inay si toos ah macaamiishooda ugu diraan unugyada caawinta ee 811 PRA.
Qandaraasyada Kaalmada Ijaarka
Ganacsigu wuxuu la geli doonaa heshiisyada Kaalmaynta Kireysiga milkiilayaasha ugu yaraan 20 sano iyadoo maalgelinta ugu horreysa ay qaadan doonto muddo 5 sano ah. Maalgelinta wixii ka dambeeya 5ta sano ee ugu horreysa waxay ku xiran tahay maalgelin dheeraad ah oo HUD ah. Heerarka kirada RAC ayaa ka sarreyn doona FMR ama 50 boqolkiiba AMI, iyadoo lacagaha 811 PRA ay yihiin farqiga u dhexeeya taas iyo kireystaha oo la siinayo, gunnooyinka laga jaro adeegga.
Mulkiilayaashu waa inay ogolaadaan inay duubaan Heshiiska Adeegsiga ee aan ka yarayn 30 sano, foomka ay soo saartay HUD. Inta lagu jiro muddada Heshiiska Isticmaalka, milkiilayaashu waa inay ka dhigaan tirada la oggolaaday ee unugyada caawinta ee loo heli karo degganaan kaliya qoysaska buuxiya shuruudaha u qalmitaanka.
Lacag bixinta Banaanada
Waxaa jiri doona lacag bixinno bannaan oo kooban.
Si loo helo lacag bixin, xogta kireystaha waa in la galiyaa HUD Nidaamka Shahaadada Kaalmada Kireynta Kireystayaasha (TRACS) iyo Xaqiijinta Dakhliga Ganacsiga (EIV) waa in loo adeegsadaa in lagu xaqiijiyo dakhliga.
Fiiro gaar ah: dukumintiyada hoose waa PDF.
Tilmaamaha Barnaamijka PRAD
Bandhiga 3 - Heshiiska Dhexgalka Washington
Bandhiga 5 - Tilmaamaha Barnaamijka
Bandhiga 7 - Heshiiska Caawinta Kirada
Bandhiga 8 - Qandaraaska Kaalmada ijaarka (Qaybta 1)
Bandhiga 9 - Qandaraaska Kaalmada ijaarka (Qaybta 2)
Bandhiga 10 - Adeegso Heshiis
Bandhiga 11 - Ijaarashada Model
Wadooyinka DSHS ee Nolosha Bulshada: Kheyraadka Guryeynta (website)
Ogeysiiska HUD ee Asalka ah ee Maalgelinta (website)
Qaybta 811 PRAD NOFA (website)
Maareeyaha Barnaamijka Kaabista Guriyeynta Joogtada ah